Galoofyada taabashada Mujjo, waddo ka baxsan iyo galoofyada taabashada ah | Wararka IPhone
Gacan-gashiyada Mujjo Touchscreen, gacmo-gashi waddada ka baxsan iyo gacmo gashi taabasho leh
Jiilaalku durba wuu dhow yahay taasna waxay ka dhigan tahay in dhulkeenna badan in heer kulku dhulka ku soo dhacayo. Xirashada galoofyada gabi ahaanba waa ku qasab inta badan dadka dhimanaya, iyo haddii aad ka mid tahay kuwa ka faa'iideysta socodka subaxa si ay ula qabsadaan wararka shabakadaha bulshada iyo wararka, hubaal waxaad ka fakartay ku habboonaanta galoofyada taabashada leh.
Mujjo ma aha mid ka mid ah noocyada ugu caansan ee aan ka helno aaladaha iphone-ka si jaanis ah, waa iyada oo mudnaanteeda leh iyo badeecooyinka sida gacmo gashiyadan cusub ee aan idiin soo bandhigi doonno, oo lagu daray liiska badan ee galoofyada taabashada ah ee ay horayba u lahaayeen waxay leeyihiin, dhammaantoodna leh muuqaal guud, dusha oo dhami waa mid waxtar leh markaad taabato shaashadda iPhone-kaaga, marka lagu daro naqshad aad u taxaddar badan. Waxaan isku daynay iyaga waana kuu sheegeynaa waxyaabaha aan dareensan nahay.
Markii aan ka hadlayno galoofyada taabashada ah, galoofyadaas cudbiyeed waxay maskaxda ku hayaan maskaxda suulka iyo farta midab kale si ay u awoodaan inay taabtaan shaashadda taleefanka casriga ah. Mujjo intaas ayuu ku dhamaaday waqti dheer ka hor, gacmo gashiyadiisuna waxay tusaale u yihiin wax soo saarka tiknoolajiyada oo aan u ekaan.. Waqti dheer kadib xirnaa gacmo gashiga taabashada maqaarkooda (gabi ahaanba cajiibka ah) ee aan ku eegay qodobkaan (isku xirka) Shaki igagama jirin in qaabkan cusub ee isboorti uusan i niyad jabin doonin, mana aanan khaldamin.
Iyada oo leh lakab saddex geesood ah iyo 3M Thinsulate, galoofisyadan ayaa dammaanad ka qaadaya in gacmahaaga laga ilaalin doono heerkulka qabow ee xilliga qaboobaha iyo dabaysha. Qalabkan iyo naqshaddiisa isboortiga waxay ka dhigayaan kuwo ku habboon maalin-maalin ama xitaa isboorti. Iyagu waa kuwo aad u deggan oo haddii aad si sax ah u doorato cabbirkaaga (gudaha Mujjo.com waxaad haysaa hage aad ku sameyso adoon qalad sameyn) galoofyada ayaa sifiican ula qabsan doonta gacantaada, waxey kuu ogolaaneysaa inaad mobiilkaga kaxaysato adigoon ka baqayn inaad hoos u dhigto, isticmaal oo xitaa qor farriimaha gaagaaban adigoon dhib badan qabin.
Gacan-gashiyaashu gabi ahaanba waa madow yihiin, oo aan lahayn calaamado marka laga reebo mid ka mid ah curcurka aadka u dhow ee ku qoran "Mujjo". Gudaha waxay ku leeyihiin silsilado silikoon ah oo kuu oggolaan doona inaad qabsato walxaha sida iPhone-kaaga adiga oo aan ka baqayn inaad siibato. Waxaan u isticmaali jiray inay kubbadda cagta ciyaaraan wayna fiican yihiin si ayan kubbadu u sibiban tuurista. Sidii aan horayba u sheegay, waa gacmo gashiyo dhul-dhan oo isku mid ah raacidda mootada, shaqaynta ama kubbadda cagta.
Oo waxaan ku iri bilowgii, waad isticmaali kartaa qayb kasta oo gacantaada ka mid ah si aad u taabato shaashadda iPhone-kaaga, ma aha oo kaliya faraha ugu horreeya iyo kan labaad, sida galoofyada noocan ah badankood. Tani waxay ku mahadsan tahay daaweyn ay dharka hesho ka hor intaan la tolan. si aad u sameysid galoofyada taasna waxay u oggolaanaysaa inay la mid noqdaan maqaarkaaga markaad taabato shaashadda taleefanka casriga ah.
Gacan-gashiyada cusub ee taabashada ah ee Mujjo waa shey wareegsan oo isku dhafan tiknoolajiyada dharka ugu dambeysa leh naqshad ku habboon isticmaalka maalin kasta. Dabayl u adkaysata, oo leh kuleylka kuleylka leh iyo qalab aad u raaxo leh oo si fiican ula qabsada gacantaada, iyagu waa mid ka mid ah gacmo gashi yar oo ku faani kara inay wax ku dhaqmayaan 100% dusha sare, si aad u isticmaali karto shanta farood, ama xitaa jilbahaaga, si aad u isticmaasho shaashadda iPhone-kaaga. . Qiimaheedu aad ayuu ula mid yahay waxa galoofyada tayada leh ee la midka ah ee ku bixi lahaa iyada oo aan la taaban karin, taas oo ah dhibic aad ugu habboon oo ku habboon in la siiyo Kirismaskan. Waxaad ku haysataa Amazon (isku xirka) ilaa € 50.
Gacan-gashiyada Mujjo Touchscreen
Naqshad aad u fiican iyo qalab
Dushiisa oo dhami waa tabeelle
3M Khafiifiya sifeynta kuleylka weyn
Jeexjeexyada silikoonka si ay si fiican ugu qabsadaan walxaha
Ma ahan kuwo biyuhu xireen
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » iPhone » dhowr » Gacan-gashiyada Mujjo Touchscreen, gacmo-gashi waddada ka baxsan iyo gacmo gashi taabasho leh
Ciyaaraha Epic-ka waxay ka saarayaan dukaanka App Infinity Blade saddexleyda
Amazon waxay cusbooneysiisaa Alexa oo leh jadwalka jimicsiga iyo xusuusinta, iyo taageerada emaylka